Uyilo oluCwangcisiweyo oluBini-mbini lwe-3D die Casting yeAntique yeCopper Coin Badge yeSouvenir
Ubungakanani: malunga ne-6cm
Nesingxobo umbala: ubhedu antique
Amanqaku: i-3D emacaleni amabini
Packaging: Iibhegi ezininzi / ibhokisi yesipho.
Inkqubo yobugcisa: ukubumba, ukufa, ukupholisha, ukugoba, i-QC, ukupakisha.
Umsebenzi wobugcisa: i-3D die casting, akukho enamel
Izikhonkwane ze-enamel ezenziwe ngokwezifiso:
ekwabizwa ngokuba 'zizikhonkwane ezenziwe nge-enamel', zii-qualitydie ezibethe iibheji zentsimbi ezizaliswe ngesandla se-enamel ngombala. Yintoni eyahlula izikhonkwane ze-enamel ezithambileyo yindawo ethintelweyo yoqweqwe lwawo engaphantsi kuneendawo eziphakamileyo zentsimbi ezijikeleze yona.
Izikhonkwane ze-enamel ezithambileyo zilungelelene noluhlu lwezihlandlo, ukusuka kwizazisi zenkampani kunye neendawo zokufikela kwindawo yokwazisa abasebenzi kunye nezikhonkwane zokurhweba ngamaqela, ngakumbi ukuba uyilo olulula okanye oluntsokothileyo.
Singumenzi onamava. Ukoyisa uninzi kwizatifikethi ezibalulekileyo zentengiso yalo ye-OEM / ODM ethengisa ukuthengisa eshushu yeBhola ekhatywayo yeBhola ekhatywayo yeBhola ekhatywayo ekhunjulwayo yeNdebe yeNdebe yeBhola ekhatywayo, Enenkonzo ebalaseleyo kunye nomgangatho, kunye neshishini lorhwebo lwangaphandle olunobunyani kunye nokhuphiswano, oluya kuthenjwa kwaye lwamkelwe ngabaxumi bayo kwaye yenza ulonwabo kubasebenzi bayo.
Ihowuliseyili ye-OEM / i-ODM yeMbasa yezeMidlalo yaseTshayina kunye nexabiso leMedali, Sineminyaka engaphezu kwe-8 yamava kolu shishino kwaye sinesidima esihle kule nkalo. Izisombululo zethu ziphumelele indumiso evela kubathengi kwihlabathi liphela. Injongo yethu kukunceda abathengi baqonde iinjongo zabo. Besisenza iinzame ezinkulu zokufezekisa le meko yokuphumelela kwaye siyakwamkela ngokunyanisekileyo ukuba usijoyine.
Egqithileyo I-Zinc Alloy Die Casting ye-Antique yesikhumbuzo seSilivere ye-3D
Okulandelayo: Uyilo oluCwangcisiweyo lwe-2D ye-3D yenziwa e China
Iipini zebheji yezilwanyana
Chain Brooch Lapel Pin
I-Pin yePheji yebheji
Custom Commander S Coin Gold ngumaleko Soft lwawo ...
Kabini-emacaleni siko Uyilo Soft wayesebenzisa Umbala An ...
Amacala kabini Custom Design Metal Ibheji Soft Ena ...
Zinc ingxubevange Die Casting Antique Isikhumbuzo Commemora ...
Coin Metal Coin Zinc ingxubevange Made D Dual ...
Kabini-emacaleni Embossment Antique Umzimveliso Souvenir ...